I-WordPress Yamabhizinisi Amancane | Martech Zone
Ngenkathi kunethoni labantu embonini ecindezela i-WordPress, kungasabisa ngebhizinisi elincane ngaphandle kwe-tech savvy ukwenza ukwakha isibonelo sabo se-WordPress. Le infographic enhle ehamba umuntu noma iqembu ngokusebenzisa lokho abakudingayo ukukuqonda nokusetha lapho behlela futhi basebenzise isiza sabo se-WordPress. Ngiyayithanda le infographic ngoba idinga ukuthi umsebenzisi achofoze afinyelele ku microsite exhumana ukubona impendulo.
Ngokubona kwami, kunesincomo esisodwa kuphela esilahlekile kuzincomo - futhi lokho kuzohamba ne- uNdunankulu we-WordPress service hosting njengoFlywheel. Ngokuhamba nomninikhaya omkhulu, ibhizinisi elincane lingangqongqoza cishe uhhafu walezi zinkinga ohlwini lwazo lokuhlola, kufaka phakathi izipele, ukuphepha, ukunakekelwa, ukusebenza, nokusekelwa!
Tags: kanjani i-wordpressukusetha i-wordpressi-wordpress kanjani
Sep 9, 2012 ngo-7: 12 PM
OMG! Thanda isitatimende esithi "Ngombono Wami" ngaphezu kwakho konke! Obani emiqondweni yabo efanele bangakucabangela lokhu uma manje sinezisombululo ezinkulu nezingabizi ze-SaaS? Lapha eTyner Pond Farm (ibhizinisi elincane ngokusobala.) Sisebenzisa zombili iCompendium neHubspot. Kulula, kuyalinganiswa futhi akubizi. Akukho lapho kule infographic engibona khona okuthile mayelana ne-analytics noma i-ROI yokulinganisa.
Sep 9, 2012 ngo-9: 38 PM
Abantu nakanjani bazithathela phansi izinsizakusebenza ezidingekayo zokwakha ukuqaliswa kobuchwepheshe be-WordPress. Bacabanga ukuthi “kumahhala” bese bethola kancane zonke izingqinamba ngokwenza ngokwezifiso, ama-plugins, ukwakhiwa kwezakhiwo, izipele nokuphepha. Siyayithanda i-WordPress kepha sinonjiniyela we-WordPress wesikhathi esigcwele nomklami kubasebenzi… awekho amabhizinisi amaningi kakhulu anazo lezo zinsiza!
Dec 13, 2012 ku-2: 33 AM
Ngiyabonga ukungifundisa ukuthi ngingalisebenzisa kanjani ibhizinisi elincane. I-WordPress ithembekile ngempela futhi ine-infographic eqondayo. Kuyinto ezozuzisa ibhizinisi eliningi, ngoba ingasebenza njengenye into kubantu bakho.